मनोरंजन – Ap Nepal
आहा ! कति मिठो स्वर , बुवाले सानैमा छोडेर भागे , भिरमा फुलेकी प्रितीको जादुमय स्वर (भिडियो सहित)
नुवाकोट जिल्लाको तारकेश्वर गाउँपालीका वडा नम्बर ६ मा पर्ने मछुवा भन्ने गाउँमा घर भएर बसोबास गर्दै आएकी २१ बर्षिय प्रीति रिमाल नाम गरेकी युबती हेर्दा जति राम्री छिन त्यति नै सुन्दर एवम मधुर छ उनको स्वर । उनको स्वरले कसलाई चाहिँ मन्त्रमुघ्ध नपार्ला र ! सानैमा बाबु गुमाएकी प्रीतीको घरको आर्थिक अबस्था भने एकदमै कमजोर रहेको छ । उनकि सहाराको रुपमा उनकी आमा रहेकीछिन । खेतीपाती र मेलापात गरेर नै जसोतसो उनिहरुले जिबन गुजारा गरिरहेका छ्न । यस्तो दुखैदुखमा हुर्कीएकी प्रीतिको कला भने अद्भुत रहेको छ । उनको स्वर एकदमै मन बहलाउने किसिमको रहेको छ । उनले कैयौं गीतहरु गाएर सुनाईन पनि, उनको जादुमय स्वर जति सुने पनि सुनौ सुनौ लाग्ने किसिमको रहेको छ । भुकम्पले घर र बाबुले सानैमा उनको परिवार चर्काएका रहेछन । कहिलेकाही जब अरुको बाबुलाई देख्दा भने आफ्नो पनि बाबु भइदिएहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भन्दै भक्कानिइन उनि
गायिका इन्दिरा जोशी भोलि विवाह बन्धन्मा बाँधिने ..
गायिका इन्दिरा जोशी भोलि (मंगलबार) विवाह बन्धन्मा बाँधिने भएकी छिन्। जोशीले प्रेमी शरद केडियासँग लगनगाँठो कस्न लागेकी हुन्।उनीहरु लामो समयदेखिको प्रेममा रहेको थिए। विवाहको पूर्वसन्ध्यामा गायिका जोशीले आइतबार मेहन्दी मनाएकी छिन्। गायिका जोशी र शरदले इन्गेजमेन्ट गरेको लामाे समय वितेसकेकाे छ। इन्दिराका प्रेमी शरदले हेलिकप्टर मार्फत सगरमाथा आधार शिविरमा लगेर गायिका जोशीलाई प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए। यो पनि.... प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ । बैठकमा सांसदहरूले बजेटमाथि उठाएका प्रश्नमाथि मन्त्रीहरूले जवाफ दिने भएका छन् ।संसद सचिवालयको सम्भावित कार्यसूचीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, सहरी विकास मन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प
पहिलोपल्ट चश्मा लगाएर अनिताले यसरी सजिइन ,यसरी बो’ लिन अनिता (हेर्नुस् भिडियो सहित )
अनिता खडका र विनोद खडका यो जोडीलाई नचिन्ने सायदै कम होलान् ।यो जोडी नेपालकै एउटा नमूना जोडीको रुपमा चिनिएको छ । टि`कटकबाट भा’इरल भएको यो जोडीको वास्तविकता निकै नै मा,’र्मिक र आत्मियताले भरिएको छ । पछिल्लो समय अनिताको स्वास्थमा निकै नै सुधार आएको छ । कुनै समय अनिताको शरीरको तौल घटेर २७ किलोसम्म पुगेको थियो । तर अहिले अनिता निकै मोटाएकी छिन । अहिले उनको तौल बढेर ५५ किलो पुगेको छ ।अहिले उनी बिना कसैको सहारा बस्न सक्छिन सामान्य चिजहरु मुखसम्म हातले लगेर आफै खान सक्छिन् ,मान्छे चिन्छिन् र एकदमै खुसिसाथ रहन्छिन् । अ`प्रेसन फे`ल भईसकेपछि निकै नि दु`खद समयबाट गुज्रिरहेको अनिता परिवार अहिले भने सामान्य खुसि र अधिक्तम दु`खि नै छ ,खुसि यो मानेमाकि अनिता हिड्न सक्ने सम्म भइन अनि दुख चहि उनको उपचार पै`सा अ`भावले गर्दा रोकिरहन्छ ।भ`गवान् जस्ता श्रिमान पहिलोपटक नै थियो यसरी रो`एको ,अनिताको सु-स्वास
महानायक राजेश हमालले यसरी ससुरालीमा मनाए ५८ औं जन्मदिन (भिडियो सहित)
काठमाडौं । अभिनेता राजेश हमालले आफ्नो ५८ औं जन्मदिन मनाउँदै आफू अभिनित नयाँ म्युजीक भिडियो ‘गुन्द्रुक तिउन’ सार्वजनिक गरेका छन् । झक्तपुरको ससुराली रेष्टुरेन्टमा पत्रकार भेटघाट गर्दै गीतको सार्वजनिक गरिएको हो । सोहि कार्यक्रममा अभिनेता हमालको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा म्युजीक भिडियो टिमको तर्फबाट केक काटियो । कार्यक्रममा ससुराली रेष्टुरेन्टको तर्फबाट पोष्टरमा अभिनेता हमालको १८ औं जन्मदिन भनेर लेखिएको थियो । त्यसै प्रसंगमा सञ्चारकर्मिले आज तपाईको कतिऔं जन्मदिन भन्ने प्रश्नमा हमालले ठट्टा गर्दै भने, ‘म जब १८ बर्ष पुगेको थिएँ त्यो समयदेखी उमेर गन्न छाडिदिएँ । त्यसैले १८ लेखिएको होला ।’ जन्मदिनकै अवसरमा ‘गुन्द्रुक तिउन’ गीतको सार्वजनिक गर्न पाएकोमा खुसी ब्यक्त गर्दै हमालले भने, ‘नेपाली मौलिक लोकगीतमा अभिनय गर्ने अवसर पाएँ त्यसका लागी टिमप्रति आभार ब्यक्त गर्छु ।’ राजु परियार र करुणा राई
”म्याडम टिक-टक बनाइ`दिनुस् म रुन्छु ”‘ भन्ने भाइको घरदेखि स्कुलसम्म पुग्दा..घरमा यस्तो बि’जोग (भिडियो सहित)
टिकटक, कमै मान्छे होलान् जसलाई टिक`टकको बारेमा थाहा नभएको होस । टिकटक बालबालिका, युबायुबती र बृद्ध`बृद्धा सबैले कला प्रस्तुत गर्ने माध्यमबाट प्रद`र्शन गर्ने बढ्दै थालेका छ्न । सुरुमा म्युजिकक लिको नाम`बाट बाहिर निस्केको टिकटक पछि नाम फेरेर टिकटक बनाइएको हो । पछिल्लो समय यहि टिकटक मान्छेको लागि मनोरञ्जनको साधन मात्र नभएर आयाआर्जनको स्रोत समेत बन्न पुगेको छ । सबैको रहर हुन्छ टिकटकमा भा”इ”रल हुने र समय`समयमा हामी फरकफरक मान्छेहरु टिक`टकमा भा”इ”रल भएको पनि देखिरहेका हुन्छौ। सामान्यतया टिकटकमा भाइरल हुनको लागि केही नयाँ एवम रोचक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबैको दिमागमा खेल्ने नै कुरा हो पछिल्लो समय सामाजिक संजाल सामाजिक संजाल टिकटकमा धेरै नै किसिमका प्रतिभा हरु देख्न सकिन्छ। टिकटकको माध्याम बाट धेरै ले रोजगारि पाएका छन्। आज हामी टिकटकमा यति वेला धेरै दर्शकले रुचा`एका चार वर्षीय बालक
“म्याडम टिक-टक बनाइदिउस् म रुन्छु” भन्ने बालकलाई भेट्दा यस्तो रमाइलो , तर घर पुग्दा सारै दु:ख लाग्यो…हेर्नुहोस ( भिडियो सहित )
टिकटक, कमै मान्छे होलान् जसलाई टिक`टकको बारेमा थाहा नभएको होस । टिकटक बालबालिका, युबायुबती र बृद्ध`बृद्धा सबैले कला प्रस्तुत गर्ने माध्यमबाट प्रद`र्शन गर्ने बढ्दै थालेका छ्न । सुरुमा म्युजिकक लिको नाम`बाट बाहिर निस्केको टिकटक पछि नाम फेरेर टिकटक बनाइएको हो । पछिल्लो समय यहि टिकटक मान्छेको लागि मनोरञ्जनको साधन मात्र नभएर आयाआर्जनको स्रोत समेत बन्न पुगेको छ । सबैको रहर हुन्छ टिकटकमा भा”इ”रल हुने र समय`समयमा हामी फरकफरक मान्छेहरु टिक`टकमा भा”इ”रल भएको पनि देखिरहेका हुन्छौ। सामान्यतया टिकटकमा भाइरल हुनको लागि केही नयाँ एवम रोचक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबैको दिमागमा खेल्ने नै कुरा हो पछिल्लो समय सामाजिक संजाल सामाजिक संजाल टिकटकमा धेरै नै किसिमका प्रतिभा हरु देख्न सकिन्छ। टिकटकको माध्याम बाट धेरै ले रोजगारि पाएका छन्। टिकटक मार्फत नै धेरै व्यक्ति हरु भबिस्य बनि बनेको देख्न सकिन्छ।
‘मिदी भाइ’ नवराज कम्फु मास्टर बनेर बल्छि धुर्बेको सिरियलमा भित्रिए (भिडियो सहित)
म्यादी भाइको रुपमा भाइरल किशोर नवराज रेग्मी सिरि`यल अभि`नयमा देखिएका छन् । उनी ‘हल्का रमाइलो’ नाम सिरियल अभि`नयमा देखिन थालेका हुन् । आइतबार प्रसारण भएको सिरि`यलको नयाँ भागमा उनी पनि देखि`एका थिए । सिरि`यलमा उनी म्यादीकै पोसा`कमा प्रस्तुत भएका थिए । रेग्मी ‘हल्का रमाइलो’ को अझै केही भागमा देखिने निर्दे`शक मरिचमान श्रेष्ठ ‘बल्छी धुर्वे’ ले बताए । ‘मलाई सिरिय`ल खेल्न मन छ भनेर रेम्मीले धेरै पटक फोन गरेर रिक्वेष्ट गरे`पछि सिरिय`लमा अभि`नय गर्न अवसर दिएका हौँ’ निर्दे`शक श्रेष्ठले भने ‘अब केही भागमा उनी देखिनेछन् ।’ अहिले सिरियलमा म्यादीकै पोसाक`मा भित्र्याए`को भए`पनि अब कुनै रमाइलो पत्रको रुपमा अगाडि ल्याउने श्रेष्ठको भ`नाई रहेको छ । कपिलवस्तु बाण`गंगा नगरपालिका– ४ का १६ वर्षीय रेग्मी म्यादी हुँ भन्दै एक भिडियो सामा`जिक सञ्जालमा हालेपछि भाइ`रल भएका थिए । उनले म्यादी पोसाकको भिडि`योमा
May272022 by adminNo Comments
विजय र्यालीमा बालेनले हाने र्याप, सबैले गरे तारिफ (भिडियो हेर्नुहोस् )
Posted in भिडियो, मनोरंजन, राजनीति
काठमाडौं महानगरपालिकाका नयाँ मेयरका रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार बिहीबार ३२ वटै वडाको मतगणना सकिएसँगै बालेन मेयर निर्वाचित भएका हुन्। बालेनले ६१ हजार ७६७ मत ल्याएका छन्। त्यस्तै कांग्रेसकी मेयर उम्मेदवार सिर्जना श्रेष्ठले ३८ हजार ३४१ मत ल्याएकी छन्। एमालेका केशव स्थापितले ३८ हजार ११७ मत पाएका छन्। आँखीझ्याल चुनाव चिह्नमा लडेका स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन सायमीले १३ हजार ७७० मत पाएका छन्। त्यस्तै उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डंगोल विजयी भएकी छन्। उनले ६८ हजार ६१२ मत पाएकी छन्। उपमेयरमा गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका रामेश्‍वर श्रेष्ठले २३ हजार ८०६ मत पाए। धरान उपमहानगरपालिकाका लागि नव निर्वाचित मेयर हर्कराज साम्पाङ्ग राई बिहिबार झाडु बोकर सरसफाईका लागि भानु चौकमा पुगेका छन् । क्लिन धरानको अभियान सहित मेयर
टिक-टकमा भाइरल भैरहेकी यी युवती ! उनलाई यो भिडियोले भाईरल गरायो
टिकटकमा नया नया कुरा भाईरल भैरहन्छ । पछिल्लो समय एक युबतीको डान्स भाई`रल भएको छ । रुख अधुरो पात बिनाको बो`लको गितमा गरिएको नाचमा एघार हजार माथी कमेन्ट र २ लाख ८० हजा`र लाईक पुगेको छ । झन्डै ४० लाखले हेरेको भिडि€योमा आखीर के छ त र को हुन् त ति युवती खोजीहुन थालेको छ । शरिरको माथिल्लो भाग अनेपक्षित रुपले हल्लिएको उक्त भिडि`योमा अरु भिडियो हरुभने नर्मल छन् । उनको भिडियो`लाई डाउन`लोड गरेर रेल अधुरो लिक बिना र रुख अधुरो पात बिना भन्दा रेल र रुख हालेर धेरै युवा`ले टिकट`क बनाईरहेको देख्न पाईन्छ । उनको टिकटक प्रो`फाईल मा कुने उनिबारे जानकारी नभ|एपनि उनको नाम कस्मीरा रेग्मी भएको बुझिएको छ । रुकुम घर भएकी कस्मि`राको बारेमा अन्य खासै जा`नकारी आएको छैन ।